Mid ka mid ah Shantii Qofba ee Daryeela Ilmo qaba Autism Maamula CBD • Daroogada Inc.eu
Mid ka mid ah shantii qofba ee daryeela ilmo qaba cudurka autism ayaa maamula CBD
Laga soo bilaabo sahan in ka badan 160.000 oo akhristayaal ah Majaladda Waalidnimada Autism (APM) Ayaa loo diray, waxaa la helay in ku dhowaad mid ka mid ah shan waalidiinta ama mas'uuliyiinta ayaa ilmahooda u diray CBD siinayaa.
Guud ahaan, 73% jawaabeyaasha ayaa isu aqoonsaday inay yihiin waalidiinta ilmo qaba cudurka autism, halka ka-qaybgalayaashii soo haray ay ahaayeen ayeeyooyin, daryeel-bixiyeyaal waqti-buuxa ah, macallimiin, daaweeyeyaal, dhakhaatiir, ama shaqsiyaad ku jira xayndaabka. 19% jawaabeyaasha ayaa xaqiijiyay inay u isticmaalaan CBD cunug ku jira shaxanka si loo yareeyo astaamaha kala duwan.
Waxa xiiso leh, sahanku wuxuu kaloo ogaaday in kaliya 14% bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee UK ay diyaar u yihiin inay u tixgeliyaan CBD inay tahay ikhtiyaarka gargaarka astaamaha, marka la barbar dhigo 22% gudaha Mareykanka.
Markii la weydiiyey sababta daryeelayaasha CBD ku saabsan ilmahooda, 43% waxay sheegeen inay rajeynayaan inay yareeyaan welwelka, 37% si loo yareeyo dabeecadaha adag, 5% waxay raadsadeen gargaar ka yimaada xanuunka iyo bararka, 8% si looga caawiyo hurdada iyo nasashada, 4% si loo yareeyo saamaynta dhimista suuxdinta, jawaabeyaasha hadhay iyagoo ku sababeynaya “sababo kale”, sida hagaajinta hadalka iyo taageeridda tababarka musqusha.
Waalidiinta carruurta qaba cudurka autism -ka badanaa waxay ku taliyaan CBD
Kaliya 20% wadarta jawaabeyaasha ayaa u weecday dhakhtar si ay u helaan warqad dawooyin ah oo loogu talagalay badeecada cannabinoid, halka 83% ay sheegeen inay ku talin doonaan alaabada CBD waalidiinta kale ee carruurta ku jira.
Tiro daraasado ah ayaa muujiyey natiijooyin wax ku ool ah markii la tijaabinayo CBD sidii daaweyn loogu talagalay astaamaha asaasiga ah iyo kan labaadba ee dadka qaba cudurka autism. 2018, wax yar isku dhac lagu daabacay daaweynta CBD ee 60 carruur ah oo qaba cudurka autism ee da'doodu tahay 5-18 ee Joornaalka Autism iyo Xanuunnada Koritaanka. Daraasadda ayaa muujisay in daaweynta la cannabidiol horseeday hagaajinta dabeecadda, welwelka iyo isgaarsiinta.
Daraasadda APM waxay ogaatay in saliidaha CBD ay yihiin habka ugu badan ee maamulka, oo ay ku xigto cirridka, kaabsoosha iyo balms-ka, iyo in maamulka CBD uu ugu yaraa waalidiinta iyo daryeelayaasha carruurta da'doodu tahay 0-3.
Ilaha HempGazette (EN), caleen leh (EN), SagePub (EN)
CBDcaafimaad lehcaafimaadkacarruurtacilmi baaris
Amazon waxay bilaabaysaa inay ku iibiso alaabada CBD UK
Boqortooyada Ingiriiska - Amazon Inc (NASDAQ: AMZN) waxay bilaabeen inay soo galaan suuqa caalamiga ah ee CBD.
Wax soo saarka xashiishadda cannabis ayaa lagu xoojiyay Beljam iyada oo la yimaaddo hay'ad cannabis ah
Beljamka waxay qorsheyneysaa inay kordhiso soosaarka xashiishada dawada, iyadoo sameysa lacag badan oo la heli karo ...
Saliida CBD ee dhanjafka iyo (kutlada) madax xanuun: faa'iidooyinka iyo halista suurtagalka ah
CBD-da loogu talagalay xanuunka dhanjafka ayaa si isa soo taraysa looga hadlayaa. Xarunta, mararka qaarkood loogu yeero marijuana caafimaad, waa caan ...
Cilmi-nafsiga Cilmi-nafsiga ee Isticmaalka Khamriga: Waxa Saynisku Yidhaahdo Iyo 3 Shirkadood Oo Hadda Ka Shaqeynaya
25 Oktoobar 2021
Bangiga Ameerika wuxuu xiraa koontada bangiga ee shirkadda cilmi-baarista cannabis ee FDA-ansixisay
Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson wuxuu tixgeliyaa sharciyeynta Psilocybin
Mid ka mid ah afartii qof ee Ingiriis ah ayaa u fiirsada sharciyada daroogada, iyo waxyaabo kale, nitrous oxide ka hortag.
22 Oktoobar 2021
Madbacadaha ku yaal UK waxay musqulaha ku buufiyaan buufin ka hortag ah
saamiyada America maalgelinta Canada Canna-Tech cannabis beerista cannabis CBD saliid cbd cocaine dembi go'aan qaadasho daroogada waxbarashada Europa maaliyad ahaan caafimaad leh caafimaadka xagasha sharci ahaan sharciyeynta sharci-dejinta lsd mdma daawo daawo cannabis daawada cawska microdosing Nederland netflix cilmi baaris boqoshaada maskaxiyan mukhaadaraadka synthetic THC Maraykanka Boqortooyada Ingiriiska qabatinka cunto Adduunka oo dhan sharciga saliida cannabis baaritaanka weed beerista cannabis xtc